Ngathi-i-Anping Shiheng Medical Instruments Co., Ltd.
Ukuthengisa i-SHIHENG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD
Ifowuni yeselfowuni / Wechat: 0086 18631859989/0086 18617909888
Ikhola ye-Cervical Philadelphia
Ikhola yePlastiki yomlomo wesibeleko
Uthotho loPhando lweZandla
Medical esinqeni brace
Umdlalo wedini esinqeni
Ukulungiswa kwesisu seBelt
Uguqulo lweKnee Brace
Umdlalo weDolo oLungisiweyo
Imveliso yethuidlula umgangatho we-ail wamazwe aphesheya kunye nenqanaba lokhuseleko, kubandakanya i-CE kunye ne-FDA. umgangatho ophakamileyo kunye neemveliso ezisemgangathweni zifumana indumiso ephezulu engaguquguqukiyo yabathengi basekhaya nabangaphandle.singabavelisi be-OEM bemveliso yamathambo edumileyo yamanye amazwe. Kule minyaka, iimveliso zethu zithunyelwa eYurophu, eMelika, eAfrika, empuma mpuma Asia nakwamanye amazwe.
Iqela lethu lobungcali Ngokunyanisekileyo isebenza kwintengiso nganye yomthengi.Ukuzithemba kwethu kokona kulungileyo kwinkonzo yethu.Siza kuqhubeka nokuzisa iimveliso ezithengisekayo ngokweemfuno zentengiso zithembele kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu kwaye siqonde ukubambisana kunye nokuphumelela.
Iindleko zezabelo Anping Shiheng Medical Instruments Co., Ltd.
Inkampani enezixhobo ezizodwa zonyango kunye nezemidlalo ezithengisa izixhobo zonyango kunye nemidlalo yezemidlalo. Inkampani inefektri yayo, egubungela indawo engaphezulu kwe-12000 yeemitha zesikwere, ixhotyiswe ngendibano zocweyo zokusebenzela ezine kunye nabasebenzi bezobuchwephesha abanamava angaphezu kwama-200. ikwakhokela ababoneleli beenkonzo zamathambo emantla e China.
Sizinikezele ekuphuhliseni, ukuvelisa kunye nokuthengisa amathambo wamathambo, ukugoba kunye nokuvuselelwa kwemveliso njlnjlnkqubo yokuhlaziya uyilo lwethu, siya kuthi sivelise yonke imveliso.Umbono wolawulo lomgangatho wethu: Umgangatho kunye nokuthembeka kuza kuqala. phezulu.
Iqela le-R & D lobungcali kunye nonxibelelwano lwexesha elide lobuchwephesha kunye neengcali zesibhedlele ezigunyazisiweyo ziqinisekisa ukuba iimveliso zethu zinika ukusebenza okuphezulu kunye nentuthuzelo emzimbeni womntu.Izinto zethu ikakhulu zibandakanya uthotho oluninzi: inkxaso yentamo, inkxaso yegxalaba, inkxaso esinqeni, inkxaso yamadolo, inkxaso yeqatha, into yokuqala yokuthanjiswa, umnwe ungqameko kunye neentonga njl.
1. Q: Ngaba uyinyani okanye inkampani yorhwebo?
A: Singabantu mveliso, ngokukodwa kwimveliso yezihlangu zezilima brace kunye nezilima brace, siye iminyaka eli-15.
sinokuqinisekisa ukuba ixabiso lethu lizandla lokuqala, umgangatho ophezulu kunye nexabiso lokukhuphisana.
2. Q: Ndingayifaka njani iodolo?
A: Ungaqhagamshelana naye nawuphi na umntu othengisayo ukuze ufumane iodolo. Nceda unikezele ngeenkcukacha zeemfuno zakho ngokucacileyo kangangoko. Ke sinokukuthumelela umnikelo ngexesha lokuqala.
Ukuyila okanye ukuqhubeka nengxoxo, kungcono ukuba unxibelelane nathi ngeSkype, iTrangerManger okanye iWechat okanye iQQ okanye iWhatsApp okanye ezinye iindlela ezikhawulezileyo, xa kunokubakho ukulibaziseka.
3. Q: Ndingalifumana nini ixabiso?
A: Ngokuqhelekileyo sicaphula kwisithuba seeyure ezingama-24 emva kokuba sifumene umbuzo wakho.
4. Q: Ngaba ungayenza uyilo kuthi kunye ne-OEM ODM?
A: Ewe. Sineqela lobuchwephesha elinamava atyebileyo kuyilo lwebhokisi yezipho kunye nakwimveliso. Sixelele nje izimvo zakho kwaye siya kunceda ukwenza uluvo lwakho kwiibhokisi ezigqibeleleyo.
5. Q: Ndingalindela ixesha elingakanani ukufumana isampuli?
A: Emva kokuba uhlawule intlawulo yesampula kwaye usithumele iifayile eziqinisekisiweyo, iisampulu ziya kuba zilungele ukuhanjiswa kwiintsuku eziyi-1-3. Iisampulu ziya kuthunyelwa kuwe nge-express uze ufike kwiintsuku ezi-3 ukuya kwezi-5. Singanikela ngesampulu simahla kodwa musa ukuhlawula iindleko zothutho.
6. Q: Kuthekani ngexesha lokukhokelela kwimveliso yobuninzi?
A: Ukunyaniseka, kuxhomekeke kubungakanani be-odolo kunye nexesha obeka ngalo iodolo. Zonke iintsuku ezili-10 ukuya kwezi-30 ngokusekwe kumyalelo ngokubanzi.
7. Q: Ithini imigaqo yakho yokuhambisa?
A: Samkela i-EXW, i-FOB, i-CFR, i-ClF, njl.Ungakhetha enye yeendleko ezifanelekileyo kakhulu kuwe.
8 Umbuzo: Yeyiphi indlela yokubhatala?
A1) Samkela i-Paypal, T, iWester Union, L / C, D / A, D / P, MoneyGram, njl.
2) i-ODM, i-OEM yoku-odola, i-30% kwangaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
9. Q: Ifektri yakho ilayishwe phi? Ndingatyelela njani apho?
A: Umzi-mveliso wethu ulayishwe e-Anping County, kwiPhondo lase-Hebei e-China, kufutshane nase-Beijing
10. Q: Umzi-mveliso wakho wenza njani ngokubhekisele kulawulo lomgangatho?
A: Ukuqinisekisa ukuba abathengi bathenga izinto ezisemgangathweni kunye nenkonzo kuthi.
Ngaphambi komyalelo wendawo yomthengi, siya kuthumela iisampuli nganye kumthengi ukuba avume.
Ngaphambi kokuthunyelwa, abasebenzi bethu bezonyango baseShiheng baya kujonga i-1pcs esemgangathweni nge-1pcs.Quality yinkcubeko yethu.
Sinokwenza oku kulandelayo
Umzi mveliso 1.Real ngoomatshini kunye nabasebenzi abanezakhono
Abasebenzi abanamava kurhwebo lwangaphandle, inkonzo ekumgangatho ophezulu
3.Sinokwamkela i-odolo encinci kunye ne-OEM / i-ODM
4.I-logo eyenziwe ngokwezifiso, ileyibhile yokuhlamba, iphakheji, ikhadi lombala, ibhokisi yemibala yamkela.
5. Umyili oqeqeshiweyo kunye nabasebenzi abanezakhono banokuvelisa imveliso ngokukodwa.
Umgangatho wenqanaba eliphezulu, kunye ne-CE / FDA kunye ne-ISO certification
Ixabiso elikhuphisanayo kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo, yonke indlela yokuthumela yamkelwe
Indlela yokuhlawula eyi-8, LC, TT, Western Union, Money Gram kunye ne-paypal
Ixesha elide iwaranti nasemva-kwentengiso serive
10. Yintando yethu ukukhula kunye nabathengi bethu kunye
Idilesi: Umda woPhuhliso lwePaihuai, kwi-Anping County, kwiPhondo le-Hebei
Umnxeba: 0086 0318-7591119